" ကုသိုလ်တရားတို့၏ အကြောင်းတရားသည် ယောနိသော မနသိကာရ။
ဘယ်ကုသိုလ်မဆို နှလုံးသွင်းမှုမှန်မှ ပြုလုပ်နိုင်တယ် "
မြစိမ်းတောင်တောရလမ်းပြုပြင်ခြင်း နှင့်ပတ်သတ်၍ အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ဤနေရာကို Click ပါ။
မြစိမ်းတောင်တောရလမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ဆုံးအခြေအနေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
မြစိမ်းတောင်တောရကို လာရောက်ဖူး ကြတဲ့ ယောဂီများ၊ အလှူရှင်များ သိထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ထိုတောရလမ်း အမာခံ အုတ်ကျိုးခင်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း မှာ ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက အလှူရှင်အများစုနဲ့ အခြားအနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ အလှူရှင်များရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ကြီးအပါအဝင် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ သီလရှင်များ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ယောဂီများ၊ ဝေယျာဝစ္စများ၊ အလှူရှင်များ ဤလမ်းကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှအသုံးပြုကာ အဆင်ပြေ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက် အလှူရှင်များ အားလုံးကို မြစိမ်းတောင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးက အမြဲ သာဓုခေါ်လျှက်ရှိကြပါတယ်။
(၁) မြစိမ်းတောင် ရွာကျောင်းမှ ရိုးမလမ်းအထိ အမာခံ အုတ်ကျိုးခင်းခြင်း
(၂) ရိုးမလမ်းမှ မြစိမ်းတောင်တောရ အထိ အမာခံ အုတ်ကျိုးခင်းခြင်း
(၃) မြစိမ်းတောင် ရွာကျောင်းမှ ရိုးမလမ်းအထိ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း
(၄) ရိုးမလမ်းမှ မြစိမ်းတောင်တောရ အထိ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ဟူ၍ အပိုင်း (၄) ပိုင်း ခွဲ၍ စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်စဉ် (၁)၊ (၂)၊ နှင့် (၄) ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့် အခက်အခဲမျှမရှိပဲ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် မြစိမ်းတောင် ရွာကျောင်းမှ ရိုးမလမ်းအထိ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများနှင့် အခက်အခဲ တချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် မြစိမ်းတောင်တောရကျောင်းမှ လမ်းအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးထားသော တာဝန်ခံအဖွဲ့ လူကြီးများ၊ လမ်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသော ကန်ထရိုက်တာများ၊ ကြီးကြပ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေသော သံဃာတော်များ ညှိနှိုင်းကာ ရွာအပြင်ဘက်လမ်းမှ ပြန်၍ ဖောက်ရပါတယ်။ ထို့အတွက် ယခင် အမာခံ အုတ်ကျိုးခင်းထားသည်များ လမ်းအူကြောင်းအသစ်အတွက် အသုံးမဝင်တော့သလို၊ ယခင် လမ်းအရှည် ပေပေါင်း ၆၈၄၂ ပေ မှ ယခု လမ်းအူကြောင်းအသစ်တွင် ပေပေါင်း ၇၇၄၀ပေ ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များမှ ယခင်ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုလာပါတယ်။
ထို့အပြင် လမ်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသော ကန်ထရိုက်တာဘက်မှလည်း ရိုးမလမ်းမှ မြစိမ်းတောင်တောရ အထိ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ပြီးချိန်တွင် ရိုးမတောထဲဖြစ်သဖြင့် ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသုံးရေ၊ ထိုလမ်းပိုင်း ပြန်စချိန်တွင် ပစ္စည်းဈေးကြီးများမြင့်လာခြင်း စသည့် အခက်အခဲတို့ကြောင့် မူလဈေးနှုန်း (၁၀ပေကျယ်x ၁ပေ အရှည် x ၆လက်မအထူ အောက်ခံ အုတ်ကျိုးခင်းလမ်းးကြိတ်စက်ဖြင့်ကြိတ်ပြီး) ကို ကျပ်၁၅၀၀၀ ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရာ လုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်သဖြင့် မြစိမ်းတောင်တောရမှ တာဝန်ခံလူကြီးများမှ တဆင့် ပြန်လည် သုံးသပ် ညှိနှိုင်းပေးရန် တင်ပြလာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အဆင်ပြေနိုင်မည့် ဈေးနှုန်း (၁၀ပေကျယ်x ၁ပေ အရှည် x ၆လက်မအထူ အောက်ခံ အုတ်ကျိုးခင်းလမ်းးကြိတ်စက်ဖြင့်ကြိတ်ပြီး ) ကျပ်၁၇၀၀၀ ဖြင့် ဒုတိယ လမ်းပိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လက်ခံခွင့်ပြုပေးရပါတယ်။ ထိုကိစ္စများကို ဝါမဆို ခင် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စင်္ကာပူတရားစခန်းအပြီးတွင် အသိပေး၍ ဆက်လက် အလှူခံရန်ဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ၂၀၁၆ တရားစခန်းကို နှစ်ကုန်ခါနီးမှ ကျင်းပဖြစ်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အသိပေး နောက်ကျရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းအတွက် ယနေ့အထိ ငွေကောက်ခံရရှိငွေ စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၁၀၇, ၀၅၃, ၇၀၀ (စာဖြင့် သိန်း တစ်ထောင် ခုနှစ်ဆယ်နှင့် ငါးသောင်းသုံးထောင်ခုနှစ်ရာကျပ်) ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျငွေ ငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၁၂၅, ၀၀၀, ၀၀၀ (စာဖြင့် သိန်း တစ်ထောင် နှစ်ရာ့ငါးဆယ်ကျပ်) ဖြစ်သဖြင့် ပေးချေရန် ကျပ် ၁၇, ၉၄၆ ၃၀၀ (စာဖြင့် သိန်းတစ်ရာ့ ခုနှစ်ဆယ် ကိုးသိန်း လေးသောင်း ခြောက်ထောင် သုံးရာကျပ် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာဖြင့် ၁၈၈၉၀ ခန့်) ကျန်ရှိ ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြစိမ်းတောင် တောရအတွက် လိုအပ်ချက်များကို အမြဲစုံစမ်းပြီး လှူဒါန်းရန် မေးမြန်းနေသူများ၊ ယခင်လမ်းအတွက် မလှူလိုက်ရသူများ၊ ထပ်မံလှူဒါန်းလိုသူများ
ကွန်ကရစ်လမ်း ၁၀ပေ အကျယ် x ၁ပေ အရှည်လျှင် S$ 18 နှုန်းဖြင့်
၁၀ပေ အကျယ် x ၁ပေ ရှည်အတွက် S$ 18၊
၁၀ပေ အကျယ် x ၅ပေ ရှည်အတွက် S$ 90
၁၀ပေ အကျယ် x ၁၀ပေ ရှည်အတွက် S$ 180
၁၀ပေ အကျယ် x ၂၀ပေ ရှည်အတွက် S$ 360
အစရှိသဖြင့် မိမိတို့ သဒ္ဓါတတ်အား နည်းများမဆို ကုသိုလ်ယူ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန် အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ ပေဖြင့်တွက်မည်ဆိုပါက လှူဒါန်းရန်
ပေပေါင်း ၁၀၄၉ ပေခန့် ကျန်ရှိပါတယ်။
မကျော့ကျော့ခိုင် +65 98446120
ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး +65 91197361
မဖြူစင်ကျော် +65 90076620
ဇော်မိုးစံ +959 251012069 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
လှူဒါန်းရန် Account No POSB Saving 024-47034-2
လမ်းပြီးစီးမှုပုံများနှင့် လမ်းကန်ထရိုက်တာ ဘက်မှ ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ ကို ဒီနေရာမှာClick ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်သည့် ကုန်ကျငွေ ပြည့်သည်နှင့် အလှူရှင်ဟောင်းများ၊ အလှူရှင်သစ်များအားလုံးပေါင်းကာ အများ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ကဗျည်းထိုး မှတ်တမ်းတင်ပေးထားပါမယ်။
လှူဒါန်းထားပြီး အလှူရှင်စာရင်းတွင် မပါသေးပါက အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင် ပါတယ်။
ဖခင်(ဦးတင်အောင်)မိခင်ဒေါ်နှင်းရွှေတို့အား အမှူးထား၍ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်
ဦးဝင်းထွန်း ဒေါ်စံအေးခိုင် သားကြီးကောင်းမြတ်ထွန်း သားငယ် ဘုန်းမြတ်စံ ကောင်းမှု
ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဠ်+ဒေါ်သန်းညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သမီး Dr .ခင်အေးမူ နှင့် ဒေါ ်မိမိတင် မိသားစု ကောင်းမှူ
ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးတင်နွယ် နှင့် မိခင်ဒေါ်ခင်သိန်းတို့အားရည်စူး သမီး Dr. မြစိုးနွယ် ကောင်းမှူ့
ဦးအောင်ဝေလင်း + ဒေါ်ခင်အေးဝင်း မိသားစု
ဦးချစ်ကိုကို + ဒေါ်ခင်ပြည့်စုံလင်း သမီး လင်းသံစဉ်ကို သား လင်းရောင်နီကို မိသားစု
နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုမျိုးကျော်+မချောစုစုဝင်းသား ရဲရင့်မျိုး + ထက်မြတ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု့
ဘိုးဘွားမိဘများကို အမှူးထား ၍ သမီး မေသွယ်ခင် သား မောင်အောင်မျိုးမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု
ဦးအောင်လတ်+ဒေါ်နီလာမြင့်, သမီး ဖြူထက်အောင် မိသားစု ကောင်းမှူ
ဦးနိုင်နိုင်အောင် + ဒေါ်အေးအေးမော် မိသားစု
ဦးသူရအုန်း+ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး သား အိုမေဂါ သူရ မိသားစု
ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါး ဦးကြည်စိန် ဒေါ်ကင် တို့အားရည်စူး၍ သမီး ဒေါ်ငွေလှိုင် မိသားစုကောင်းမှူ့
ဦးအုန်းသန်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်, သမီး မသိင်္ဂီမြင့် မိသားစု
ကိုပြည့်ဖြိုး + မဝင့်မာမျိုး
ကိုငြိမ်းချမ်းသူ + မဝင်းလဲ့လဲ့အောင် သမီး ဆုရည်လင်း ၊၊မေငြိမ်းချမ်း မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ရှုတင် (၂) လပြည့်အားရည်စူး၍ သမီး မချောစုလှိုင် ၊ မမေစုလှိုင် သား မောင်အောင်အောင်ထက် မိသားစု
ကိုကျော်မျိုးထွဋ်အောင်+မနုနုအောင် သမီး Bridget ပြည့်ပြည့်ထွဋ်
နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုဟိန်းထက်အောင်+မဝင်းမာထွန်း ကောင်းမှု။
သားသား ဖိုးရွှေသွေး ၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ (14 feb 2017) အတွက်ရည်မှန်း၍ ကိုဌေးနိုင်+ မနော်လေးရည်မွန်ထွေး
ကိုသက်နိုင်ဦး + မဆုမွန်သိန်း သား ကောင်းခန့်မင်း
ဦးကျေ်ာစိုးမင်း+ ဒေါ်မာမာယဉ် သမီး-ဆုပြည့်စိုးမင်း ၊သား-ကျော်ဓူရ မိသားစု
Dr.မြတ်ဉာဏ် + ဒေါ်ဝါဝါခိုင်မင်း မိသားစု - ၈၅,၀၀၀ ကျပ်
ဦးခင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်ဦးမြင့် မိသားစု (Super Mega Engineering Co.,ltd)
ကိုအေးချမ်းအောင်+မဖြူသီဟန် သမီး မအိမ့်အခရာ(ခ)ချစ်မဝ မိသားစု
ဦးသီဟ+ဒေါ်အိန္ဒြာအောင် သားမောင်Simon ဇွဲသီဟ မိသားစု
ကိုမင်ဇော်+ မဇာခြည် (ရန်ကုန်)
ကိုမျိုးသွင် + မစောမြသန္တာဝင်း မိသားစု
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း
မိဘများအား အမှူးထား၍ကိုထိုက်တင်ယျ + မနွယ်နွယ်ဝေ (စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်)
ဦးအေးမင်း + ဒေါ်ခင်စိန် မိသားစု
ဦးတော့ပ် မင်း + ဒေါ်ရွှေ မိသားစု
နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ဦးနေမျိုးအောင် + ဒေါ်ခင်မျိုးဝင်း သမီး ရတီနေမျိုး ()
ဦးဝင်းအောင် +ဒေါ်မြင့်ကြည် မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်စန်းစန်းကြွယ် အားရည်စူး၍ ဦးစိုးဝင်း + ဒေါ်သီသီဝင်း မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ရွှေအားရည်စူး၍ ကိုမျိုးညွန့်
ဦးမောင်ကြွယ် + ဒေါ်ခင်ညွန့် အေး မိသားစု
ဦးဝင်းဦး + ဒေါ်ခင်ဝင်း မိ သားစု
ကိုပြည့်စုံထွေး + မမာမာဝင်းဆွေ မိသားစု
ကိုအောင်ကျော်မြင့် + မယဉ်မင်းသွယ်
နှစ်ဖက်မိဘများအားအမှုးထားပြီး ကိုအောင်ဇော်မင်းသွင် + မတင်အေးဇင် မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ နှစ်ဘက်ဖိုးဖွား တို့အားရည်စူးရု် ဦးရဲဝင်း ဒေါ်အေးအေးမူ သားရဲနိုင်ဦးသမီး ခိုင်ငြိမ်း မိသားစု
နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုသူရဝင်းထွဋ် + မစိုးစိုးငြိမ်း သမီး အလင်္ကာထွဋ်မြတ် ဟေမန်ထွဋ်မြတ်
Global Lotus Limited
ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါး၊ အမ နှင့် အကို တို့အား ရည်စူး၍ မညိုသီတာ (ရန်ကုန်)
မမေ ဒေါ်နန်းရွှင်ရွှင်လှိုင်အတွက် မွေးနေ့ကုသိုလ်
ဖခင် ဦးဝင်းမောင် နှင့် မိခင် ဒေါ်ခင်သီတာ အား အမှူးထား၍ ဦးသန်းထွဋ် ကောင်းမှု
ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးညွန့်ရှိန်+ဒေါ်အေးကြည်အား အမှူးထား၍ သမီး မယဉ်သွယ်လင်းနှင့် မကေဇာလင်း ကောင်းမှု။
ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်း+ဒေါ်ခင်ထွေးအား အမှူးထား၍ သား မောင်အောင်ကိုလင်း ကောင်းမှု
ဦးတင်မြိုင် ဒေါ်တင်ဟန်မိသားစု (အင်းစိန်)
ဦးမြင့်ထူး+ ဒေါက်တာ အေးကြည်ကြည် မိသားစု
ဦးမြအောင် + ဒေါ်မြမြမော်
ဒေါ်ကြင်လှ ၊သား -ကိုဖြိုးကျော်(ခ)Eric Liu LA (USA)
ဦးကိုကိုထွေး + ဒေါ်အေးအေးသန်း (တော်ဝင်ဖွံဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း)
Dr.ထိန်ဝင်း + Dr.နှင်းအေးယဉ်
ဦးတိုးရွှေ + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လင်း ၊ သား မောင်ဝေယံကောင်းခန့် ၊ သမီး-မအိမ့်အိမ့်သံသာ မိသားစု
မလဲ့ဝင်းစု နှင့် သားလေး မောင်အောင်ကောင်းမြတ်
( ဦးမြင့်သိန်း ) + ဒေါ်သန်းသန်းလှ မိသားစု
Dr. ဝင်းထွန်း + မကေသီအောင် မိသားစု - (၁ သိန်း) ကျပ်
ဝမ်ကျင်းကျင်း (J Eros Company Ltd)
ကိုဝင်းဇော်ဇော်+မဆွေဆွေလတ် သ္မီးလေး မဂျူ းကေ မိသားစု
ကိုလှသန်းမိုး + မစောသွယ်အေး (ပြည်ရွှေဘို ဆန်ဆီရောင်းဝယ်ရေး)
ကိုစိုင်းခေးစစ် + မခိုင်ဇွန် , သား စိုင်းခေးဝမ်းဆိုင် ကောင်းမှု
သီဟဇော် + မဉ္ဇရီ
ကိုမျိုးမင်းသိန်း + မခင်စုစုအောင် သမီး ခင်မိုးသိန်း
ဦးသန်းဆွေ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း မိသားစု
ဦးကျော်ကျော် နှင့် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းအား အမှုးထား၍ မောင်နေယု
နှစ်ဖက်သော မိဘများ အမှူးထား၍ ကိုကိုဝင်း မတင်ရွှန်းလဲ့လွင် သား လေး မောင်ဇေခန့်အောင်
နှစ်ဖက်မိဘများ အားအမှုထားပြီး ဦးစိုးမင်းလတ်+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်း သမီးရွှေသဲလှိုင်၊ သမီးယဉ်သီရိလတ်၊ သားရှင်းသန့်အောင်၊ သားကျော်ဇေယျအောင်
ဦးတင်မြိုင် ဒေါ်မြသီတာစန်း မိသားစု
ကိုသိန်းလှိုင်ဦး မအိအိဖြိုး သမီး သီရိစံ
ကိုထွန်းလင်းအောင်+မဝင်းလဲ့ဖြိုး သား လင်းပြည့်ဖြိုး
နှစ်ဖက်သော မိဘ ၂ပါး အမှူးထား၍ ဦးကျော်သူဝင်း + ဒေါ်သင်းသင်းစိုး မိသားစုကောင်းမှူ့
မဇင်မာ မိသားစု ကောင်းမှူ
အလှူရှင် ဦးတင်အောင် + ဒေါ်မြမြဦး နှင့် သမီးများ
ဖခင် (ဦးအောင်သိန်း) ရည်စူး၍ဒေါ်သန်းရီ ၊သမီးဒေါ်တင်နွယ်ထိုက် မိသားစု (ရွှေပေါက်ကံ) ကောင်းမှူ့
ဦးမြင့်လှိုင်+ဒေါ်လှသူဇာ သမီး မခင်ခင်မြတ်သူလှိုင် သား မောင်ထက်အောင်ခန့်ကျော် မိသားစု
ကိုအောင်ဇာမင်း + မသီသီ သန့် သမီး မချောဝတီကျော်
ဦးစောဝင်းပိန်+ဒေါ်ဝင်း မိသားစု လမ်းမတော်လမ်း
ကိုဖြိုးအောင် + မမြသဇင် သမီးလေး သွန်းသစ္စာ မိသားစု
ကိုမောင်မောင်သန့်+မအိရွှေစင်လတ် သမီး မဆုလတ်ရွှေစင် မိသားစု
၁၄၆ ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင် မိသားစု
ကိုဌေးလှိုင်ဦး+ မကြူကြူသင်း နှင့်သား ရဲနိုင်ဦး
S$ 2000/ ကျပ်၁၅သိန်း နှင့်အထက် အလှူရှင်များ
အရှင်ဝဇီရဉာဏ ,Zayya Dhamma Yeikthar(CMM), Las Vegas, USA 3000 3000
ကိုသိန်းပို@ Henry+ မနီနီထွေး သမီး ငြိမ်းစု@ Janice မိသားစု 3000 3000
Delco Art Interior Ptd မှ Clement Lee Haoyu, Cecilia Lee Xin Yi
and Charmaine Lee Pei Yi
ဖခင်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်၊ မိခင်ဒေါ်လှနုတို့ အား အမှူးထား၍ သမီးမခင်ချိုထွန်း (မခိုင်ခိုင်)
ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်မာကြည်အား ရည်စူး၍ ဦးတင်ငြိမ်း၊ သမီးကြီး ခင်ပုလဲဖြူငြိမ်း၊ သမီးငယ် ခင်သရဖူငြိမ်း မိသားစု ကောင်းမှုအလှူတော်
ဦးမြတ်ဌေးလင်း+ ဒေါ်စုစုကို သားမောင်မြတ်ကိုအေး+ ဒေါက်တာ ကေဇင်ဟန်၊ သမီးငယ် မရတီလင်း
၈ Mr Francesco Casi+ မခင်မျိုးသူ သမီး Elizabeth Casi မိသားစု
S$ 1000/ ကျပ်၇သိန်းခွဲ နှင့်အထက် အလှူရှင်များ
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇဝန(ရွှေပြည်သာ) အားအမှူးထား၍ မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်္ကာပူ)မိသားစု နှင့် စေတနာရှင်၊ အလှူရှင်များ ကောင်းမှု
နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှုးထား၍ ဦးအေးကျော်+ ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး သက်ခိုင်ဇင် မိသားစု
ဦးသန်းတင်+ ဒေါ်ကျင်မြင့် သမီး မအေးဆုမွန်၊ မမြတ်ဆုနွယ် မိသားစု (Oakville)
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးတင်ငွေ၊ ဦးမြင့်လွင် တို့အား ရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်ဌေးဌေး၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေတို့ အားအမှုးထားပြီး ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သား မင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု
(ဦးလှအောင်)+ ဒေါ်နုနုကြည် သမီး မဇာဇာဝင်း၊ မနှင်းနှင်းယု မိသားစုကောင်းမှု*
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်မှုးစိန်စန်း (ငြိမ်း) အား ရည်စူး၍ ကိုမျိုးအောင်စန်း+ မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ ကောင်းမှု
ကိုမြင့်ဌေး + မတင်ဇာနီကျော် မိသားစု
ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင် မိသားစု
ကျေးဇူးရှင် နှစ်ဘက်မိဘများအား အမှုး
ထား၍ ကိုဇာနည်စိုး+ မဇာခြည်သိမ့်သိမ့် သားသမီး မြေးတစု ကောင်းမှု
ဦးငွေထွန်း+ ဒေါ်ကျင် သန်း သမီး မအေးသီတာ
ထွန်း မိသားစု ကောင်းမှု
(ဤကောင်းမှုအား ၃၁-ဘုံတွင် ကျင်လည် ကြကုန်သော ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းအား အမျှပေး ဝေပါသည်။)
မိခင်ဒေါ်တင်လှနှင့် အမ(၆)ယောက်အား အမှုးထား၍ မထားထားခိုင် ကောင်းမှု
ဒေါ်သင်းသင်းအေး (ဒေါ်ရှန်ပို) နှင့် သားသမီးမြေး တစ်စုကောင်းမှု
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးတင်နွယ်+ ဒေါ်ခင်သိန်းအား အမှုးထား၍ ဒေါက်တာ မြစိုးနွယ် ကောင်းမှု*
ဦးမြင့်သွင်+ ဒေါ်ဝင်းကြည် ကိုပြည်ြ့ဖိုးဦး၊ သမီးကြီး မမေဦးသွင်၊ သမီးငယ် မစုမွန်အေး၊ မြေး မောင်သုတိရန်ထွန်း
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုစည်သူဝင်း+ မချိုသဲမာ
ဦးစိုးမိုးနိုင်+ ဒေါ်တင်လေးခိုင် မိသားစု (လမ်းမတော်မြို့နယ်)
ကိုဇာနည်မွန်+ မယဉ်မင်းညွန့် သားဉာဏ်လင်း ထူး နှင့် သမီး အင်ကြင်းမွန် တို့မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အလှူ
ခင်ပွန်း ဦးဝင်းလွင်နှင့် သားမောင်ဝင်းထွဋ်အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမြင့် မိသားစု (အောင်စပါယ် လ္ဘက်ခြောက်၊ ရန်ကုန်မြို့။ *
ဦးစိုးသိန်း+ ဒေါ်မြသက်နှင်း သမီး
၂၆ မပန်မို့မို ့လှိုင်
၂၇ ကွယ်လွန်သူဦးစိုးဝင်းအားရည်စူး၍ကျန်ရစ်သူမိသာစု ကောင်းမှူ့ ၁၀သိန်း 1300
၂၉ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ရွှေအား
ရည်စူး၍ဖခင်ဦးဘရှိန်နှင့် သားသမီး ဦးညီညီဝင်း+
ဒေါ်သီတာအေး မြေး ဟေမန်ဝင်း၊ ဝေယံဝင်း ကောင်းမှု
၃၀ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးဦးထိပ် ထားလျှက်
ကိုဇော်ယုခိုင်+ မမြတ်ယမင်းလှိုင်၊ သမီး Angela Wu Si Xian မိသားစု ကောင်းမှု ( စင်္ကာပူနိုင်ငံ )
ဒေါက်တာမင်းထွဋ်+ ဒေါ်ခိုင်နွယ်ဦး သား သော်မင်းထွဋ် နှင့် သမီး ဝင့်မဒီထွဋ် (Jamaica)
၃၂ မဆွေဆွေမြင့်+ မခင်စပယ်
၃၃ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး မအေးချမ်းမြတ်၊
မဆုပန်ထက် မိသားစု 600 (၃သိန်း)
၃၄ Capt Maung Chai Hwat
( M.V. BOHEME )*
၃၅ Staffs's donation (M.V. BOHEME)
Ch.Eng Mya Hlaing USD 100
Ch.Off Win Myint Aung USD 200
2nd Eng Wint Htaik Kyaw USD 100
3rd Eng Ko Khin Zaw USD 100
E/E Ko Hla Htun USD 100
2nd Off Myo Zaw Oo USD 50
5th Eng Aung San Min USD 50
Eng Cadet Ye Lin Aung USD 200*
၃၆ ဦးခင်မောင်ဌေး+ ဒေါ်စိန်စိန် သမီး မနှင်းယုထွေး ကောင်းမှု
၃၇ ကိုခင်မောင်လတ်+ မကြူကြူခိုင်
သမီး လဲ့ရူပါမောင် မိသားစု
၃၈ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍
ကိုကျော်စွာဝဏ္ဏ+ မယဉ်မင်းထွန်း ကောင်းမှု
၃၉ ဦးအောင်မော်သိန်း+ ဒေါက်တာမိုးမြတ်ဝင်း သား Alvin Az မိသားစု*
၄၀ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုရဲမျိုးကျော်+ ဒေါက်တာနန်းထွေးခမ်း မိသားစု 1674.6
၄၁ ဦးသာအောင် +ဒေါ်တင်နှင်းယု မိသားစု ကောင်းမှူ
အလှူငွေ S$ 500 (25') နှင့်အထက် အလှူရှင်များစာရင်း
ကိုကျော်ဇင်မင်း+ မခင်မျိုးမျိုးညွန် ့သမီး မေနွယ်ဇင်မင်း မိသားစု*
နှစ်ဘက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုအောင်စန်းဦး+မမူမူမောင် မိသားစု
ဦးတင်ထွန်း + ဒေါ်ရီတာ (ပြုံးတရာဆင့်၊ Peninsula Plaza)*
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင် (ခ) Shoba Limbu မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးခင်မောင်မြင့်အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိခင် ဒေါ်ယဉ်မြင့် နှင့် သားသမီးများဖြစ်သော Dr သန်းထိုက်အောင်+ Dr နီလာလှ၊ Dr ယဉ်ယဉ်မွန်၊ ကိုမိုးသန့်လွင်+ မဇင်ဝါမြင့်၊ ကိုမျိုးဇော်+ မနှင်းအိခင် ကောင်းမှု့
၉ ဦးကျော်မြင် ့မိသားစု 900 900 45'
၁၀ ကိုချမ်းမင်း + မမိမိအောင် သား မောင်ရှင်းသန့်ညီ မိသားစု*
၁၃ ဦးသန်းဝင်း+ ဒေါ်ဝါဝါခိုင် သား မောင်ဇေယျာဝင်း၊ အာကာဝင်း၊ ဥက္ကာအောင်အောင်* (ရန်ကုန်)
၁၄ ကိုစောကိုဦး+ မမိုးဝေကျော်
၁၅ ကိုသိန်းစိုး+ မစိမ်းစိမ်း သမီး စုငြိမ်းချမ်း၊ ထက်ဝေစိုး မိသားစု
၁၇ ဦးကိုကိုကြီး+ ဒေါ်အေးမိ မိသားစု
၁၈ နှစ်ဘက်သော အဖိုးအဖွားများနှင့် ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်စန်းနှင့် မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ကြည် အားရည်စူး၍ မလှလှအေးနှင့် မောင်နှမတစ်စု
၁၉ ဦးဌေးဝင်း+ ဒေါ်သန်းသန်းထွေး သမီး မလဲ့လဲ့ဝင်း၊ သား မောင်စိုင်းနန္ဒဇော် မိသားစု
၂၀ U Lou Hain Tek+ Daw Yoe Lay Lee family*
၂၁ ဒေါ်မြမြသန်း (ရန်ကုန်) *
၂၂ ကိုနေမင်းသူ + မဝါဝါထွန်း (I-Myanmar Co., Ltd.)
မိဘ(၂)ပါး ဖြစ်သော ဦးသက်မြင့်မောင်+ဒေါ်မီမီဂါ အားအမှူးထား၍ မသက်ထားဦးကောင်းမှူ့
၂၄ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးမောင်ကောက်၊ ဦးလေး ဦးဇင်းစိန်ထွန်း၊ အဒေါ်၊ အကိုထွန်းထွန်းဦး တို့အားရည်စူး၍ မိခင်ဒေါ်လှမြင့် နှင့် သမီးမချိုချိုဝင်းမြင့် ကောင်းမှူ့
၂၅ ကိုအောင်ကိုမြင့်+ မထက်ထက်နိုင်
၂၆ ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီး ဦးဆင်ငန်း+ မိခင်ကြီး ဒေါ်စိန်မုှံတို့အား ရည်စူး၍ ဦးဌေးလွင်+ ဒေါ်အေးအေးလွင် သားသမီးမြေးတစ်စု (စင်္ကာပူ)*
၂၇ ကိုကျော်ကျော်ညွှန့်+ ဒေါက်တာနွယ်နီအောင်
ကျေးဇူးရှင်မိဘ(၂)ပါးဖြစ်သော ဦးစိန်မောင် + ဒေါ်ကျင်ဝင်း အားအမှူးထား၍
မောင်ဆန်းထွန်းဝင်း ၊ မသဇင်ထိုက်၊ မယဉ်ယဉ်ထိုက်၊ မအိအိထွေး တို့၏ကောင်းမှု
ဦးကျော်မိုး+ ဒေါ်အိအိတင် သား ကျော်စည်သူဟိန်း (မလေးရှား)*
ဦးမြတ်စံ+ ဒေါ်လှလှအေး နှင့် သားသမီးတစ်စု
(ဈေးချိုတန်း၊ မင်းလှမြို ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)
ကိုဝင်းလှိုင်+ မမဉ္ဇူအုန်း မိသားစု
၃၃ ကိုဘုန်းကို+ မဧဧမော်၊ သမီး ဝေလာလင်း မိသားစု (မွေးနေ့အလှူ )
၃၄ နှစ်ဘက်မိဘများ အမှူးထား၍ ကိုဖြိုးတင်သန်း + မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုး
၃၅ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မစောလဲ့စိန်
အလှူငွေ S$ 300 (15') နှင့်အထက် အလှူရှင်များစာရင်း
ဦးစံတင်+ ဒေါ်ယဉ်မေ သမီး မဥမ္မာစံ မိသားစု
ဦးဖုန်းမြင့်+ ဒေါ်စီစီဝင်း၊ ဦးဇေယျာလင်း+ ဒေါ်တင်နွယ်ဝင်း၊ ဦးမင်းမင်းကျော်ဇင်+ ဒေါ်အေးသဉ္စာနှင့် မိသားစုများ
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
ဦးအေးဌေး အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဝင်းကြည်၊ ဒေါ်ခင်စိုး၊ မဇင်မျိုးဌေး မိသားစု *(Aug)
ဦးကျော်ဝင်းတင့်+ ဒေါ်မြသီ မိသားစု
မိဘနှစ်ပါးအား ဦးထိပ်ထား၍ ကိုကျော်ကျော်ဦး+ မထိုက်ထိုက်ကျော် မိသားစု ကောင်းမှု*
ဦးဝင်းလှိုင်+ ဒေါ်ဝင်းဝင်း အေး။ ဦးအေးမြင့်+ ဒေါ်ကြူကြူလှ (မော်လမြိုင်) မိသားစု
ဦးကျော်ကျော်ဝင်း+ ဒေါ်ရီရီခိုင် အားအမှုးထား၍ သမီး မမေဝင်းခိုင် မိသားစု
ကွယ်လွန်သူ မိဘဘိုးဘွားများအား ရည်စူး၍ ဒေါက်တာ ခင်ဥမ္မာစံ ကောင်းမှု
ိုဦးကျော်မြင့်+ဒေါ်ကျင်ကြူ သမီး မတင်ဇာကျော် မိသားစု ကောင်းမှု
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ Roger Tan & Phyo Myat Su Family
ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါး ဦးကျော်ဇံ နှင့် ဒေါ်ကျင်ရီ အားရည်စူး၍ သမီးမဌေးဌေးနှင့်မောင်နှမတစ်စု
၁၇ ကိုခိုင်ထူး+ မကြည်အုန်း သမီးကြီး ဖြူဖြူခိုင်ထူး၊ သားငယ် အောင်ငွေငြိမ်း မိသားစု (ဆွီဒင်)*
၁၈ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါး ဦးဘသောင်း+ ဒေါ်သောင်းတင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်မေညွှန့် ့ကောင်းမှု*
၁၉ ဖခင်ဦးချစ်လှိုင်+ မိခင်ဒေါ်မြသန်း အား အမှုးထား၍ ကိုအောင်သူရ+ မသန္တာလှိုင်၊ သမီး သန့်ရတနာစင် မိသားစု
၂၀ ဒေါ်သီဂီ ၤကျော်၊ သမီး ကလျာမိုးမိုး၊ သား ဝေမိုးကျော် မိသားစု
၂၂ ကိုသက်လွင်+ မစန္ဒာဝင်း
ကွယ်လွန်သူ အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်ညိုစိန်၊ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းဆင့်တို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု(ပြည်) ကောင်းမှု
ဦးသိမ်းစိုး-ဒေါ်သန်းနု သမီး မကေခိုင်စန္ဒီစိုး၊ မဖြိုးပြည့်ဣန္ဒြာစိုး (ခေတ္တစင်္ကာပူ) မိသားစုကောင်းမှု
၂၇ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ဦးအောင်ဝင်း+ မိခင် ဒေါ်တင်တင်ဦး တို့ အား ဦးထိပ်ပန်လျှက် သမီး မခိုင်ဝါဝင်းကောင်းမှု
၂၈ ကွယ်လွန်သူ ဦးစံတင်အား အမှုးထား၍ ဒေါ်တင်မြ မိသားစု
၂၉ သီရိဂေဟာ မိသားစု (စင်္ကာပူ) *
ဦးမြင့်အောင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဝေ သမီး နွယ်မွန်အောင် နှင့် ဆွေမွန်အောင်
၃၁ ဦးတင်မောင်အေး+ ဒေါ်ကျော့ကျော့ မိသားစု*
၃၂ မမေကလျာနှင့် သူငယ်ချင်းတစ်စု*
၃၃ ကိုအောင်သွင်မင်း+ မဆွေလင်းမူ
၃၄ Mr Robert Chow+ ဒေါ်ပြုံးပြုံး သား Linus & Bryne မိသားစု*
၃၅ မသိဂီ ၤမြင့်
၃၆ ဲဖြူစင်ကုသိုလ် မောင်နှမများ
၃၇ မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကြင်ဆွေ + ဒေါ်တင်တင်ဝင်း အား အမှူးထား၍ သားသောင်းထိုက်ဝင်း ၊ သမီး ကေခိုင်ဝင်း ကောင်း မှူ့ 300 300 15'
၃၈ ဦးဇော်မြင့် + ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး မအေးချမ်းမြတ၊် မဆုပန်ထက်
၃၉ ကိုဉာဏ်လင်းသိန်း မွှေးနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁ ရက် ၁၃၇၆) အထိမ်း အမှတ်အလှူ အဖြစ် ကိုဉာဏ်လင်းသိန်း +မမိမိခိုင် သား မောင်ဥဂ္ဂါ မိသားစု
၄၀ ဒေါ်ကြင်ကြင်ရီ၊ ဒေါ်တင်တင်ခိုင်
၄၁ ချောစုလွင် (ဝိန်ချိုင်း)
အလှူငွေ S$ 200 / ၁သိန်းခွဲ (10') နှင့်အထက် အလှူရှင်များစာရင်း
ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအေး+ ဒေါ်စန်းစန်း
လွင် အားရည်စူး၍ သား မောင်အောင် ပြည့်စုံအေး ကောင်းမှု
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးအိုက်စိန် + ဒေါ်မာလုအား အမှုးထား၍ ကိုနေအောင်လတ် ကောင်းမှု
ကိုနော်အောင်+ မရည်မွန် မိသားစု
မိဘနှစ်ပါးအား အမှုးထား၍ မနီလာဝင်း @ အိ (မလေးရှား) ကောင်းမှု
ဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်း+ ဒေါ်ရွှေဇင်မြိုင် သား မင်းခန့် နှင့် သမီး မေမွန် (Jamaica)
ကိုစိုးမိုးကျော်+မနှင်းသီတာ သမီး စိုးဝတ်ရည်နှင်း မိသားစု
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုညီညီထွန်း+ မနန်းထွေးခမ်းလောဝ် မိသားစု
မိဘနှစ်ပါးအားအမှုးထား၍ သမီးမအေးအေးဆန်း ကောင်းမှု
ဦးမောင်နွဲ့+ဒေါ်ရီရီဝင်း (သား)ကျော်စည်သူ မိသားစု
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုလှမျိုးဦး+ မချိုချိုမာ
ကိုထွန်းထွန်းဇော်၊ မစန်းသီတာအောင်၊ မနှင်းလှိုင်ဦး၊ မခင်ဥမ္မာထွန်း
မခင်သက်သက်ငြိမ်း၊ တူမ နွယ်ရည်မွန်လင်း
ကိုတင်သန့်ဦး + မထာနီဝေ သား Son Shi Ying Jie Brendan Daughter Shi Jia Hui Estelle.
ဦးသန်းထွန်း+ ဒေါ်အုန်းမြင့် မအိပပချော မိသားစု
မိဘနှစ်ပါးအား ဦးထိပ်ထား၍ ကိုညီညီထွန်း+ မအေးစုခိုင် (မေလေး) ကောင်းမှု
ဦးမြင့်ရွှေ+ ဒေါ်မြင့်မြင့်မေ မိသားစု၊ ရန်ကုန်။ (၂၄-၁၁-၂၀၁၃၊ ၃၅နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ် လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်)
ဦးစိုးဝင်း + ဒေါ်ခင်ကြူအုန်း သမီး မအေးမြဖြိုး၊ မချမ်းမြေ့စိုး မိသားစု
ဒေါက်တာဌေးနိုင်+ ဒေါ်ဝေေ၀အောင် မိသားစု
ဦးခင်မောင်မြင့်+ ဒေါ်သန်းရီ သမီး မနေဇာလှိုင် မိသားစု
ဦးမျိုးသိန်း+ ဒေါ်နယ်လီ မိသားစု
ကိုဌေးလှိုင်ဦး+ မကြူကြူသင်း သားရဲနိုင်ဦး မိသားစု*
ဦးသိန်းအောင်ကြွယ်+ ဒေါ်ခင်လေးမြင့် သမီး မချောစုလှိုင်*
ဦးစောလွင်+ ဒေါ်ခင်ရီ၊ သမီး မခင်ဝေလွင်၊ သားကိုကိုလွင်၊ ညီညီလွင် မိသားစု
ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်မာမာ မိသားစု
ဦးလှရွှေ+ ဒေါ်သန်းသန်းေ၀ မိသားစု
ကိုကျော်အောင်+ မခင်သီတာစိုး သား မင်းသန့်ကျော် မိသားစု
ဦးခင်မောင်သန်း+ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း သားမောင်ကောင်မြတ်ဖြိုး သမီး မအိရတနာခင် မိသားစု*
ကွယ်လွန်သူ မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးကျော်မြင့်နှင့် ဒေါ်ခင်သန်းအား ရည်စူး၍ သမီး ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု (မလေးရှား)*
ကိုအောင်စစ်+ မချယ်ရီတင်ရွှေ သား အားမန်းစစ်
ဦးခိုင်မြင့်+ ဒေါ်မြတ်မွန်ကျော် သား ကျော်ဇောသူ
ဦးမောင်မောင်မြင့်+ ဒေါ်ဇင်နွယ်ညွန့် သမီး အိမို့သွယ်ခိုင် မိသားစု
ကိုလင်းထက်အောင်+မအေးသန္တာဖြိုး မိသားစု ကောင်းမှု
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစံဌေးအား ရည်စူး၍ ကိုသိန်းထိုက်စိုး+ မသန္တာဦး၊ သမီး မေထိုက်လင်း၊ ဝင့်ဝါရွှေရည် ကောင်းမှု
ဦးဘိုရှိန်+ ဒေါ်စိမ်းရီ သမီး စိမ်းစံပယ်ဖြိုး ကောင်းမှု
ဦးမြင့်နိုင်+ ဒေါ်ဝင်းညွှန့် မိသားစု
Marc Ngooi + Seow Mein Chon Family
နှစ်ဖက် မိဘ များအား အမှူးထား၍ မောင်မျိုးကျော်+ မချောစုစုဝင်း သား မောင်ရဲရင့်မျိုး၊ မောင်ထက်မြတ်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု
နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုလွမ်းမြင့် + မခင်ချိုသက် မိသားစု
မိခင်ကြီး ဒေါ်ဆိုက်စူး ၏ ၅၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူအတွက် ကိုအောင်မင်းနိုင် + မဖြူဖြူသင်း မိသာစု
ဖခင်ကြီး ဦးလှမြင့် နှင့် မိခင်ဒေါ်မေအုန်းမြင့် အား အမှူး ထား၍သမီးယမင်းရွှေစင်မြင့် ၏ ကောင်းမူ့
ဦးတင်အုန်း + ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း သမီး မခင်အေးလွင်
ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း ဦးသန်းညွန့်နှင့် သားဦးစိုးမိုး တို့အားရည်းစူး၍ ဒေါ်ယဉ်ကြည်ကောင်းမှူ့
နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုသူရဝင်းထွဋ်+ မစိုးစိုးငြိမ်း သမီး အလင်္ကာထွဋ်မြတ်
ကိုချစ်ကိုကို+ မဇာခြည်ဦး သားဟိန်းထက်ဖြိုး
ဦးအောင်ထွန်းလှိုင ်+ ဒေါ်စံအောင်ခိုင် မိသားစု ကောင်းမှူ့
ဖခင်ကြီး ဦးတင်မြင့်အား ရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်ခင်လှဝင်း ၊သမီး မဝေေ၀လွင် ၊ သား မောင်ထူးမောင်မောင် မိသားစု
မိခင် ဒေါ်ဝင်းကြည် အား အမှုးထား၍ မကေဇာခိုင် နှင့် မကေဇာလှိုင် ကောင်းမှူ့
ကွယ်လွန်သူ ဦးကျင်စိန် အားရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်ထားကျင် (ဓနုဖြူ) မိသားစုကောင်းမှူ့
ဦးအုန်းသန်း+ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းရွှေ မိသားစု*
၆၆ ဦးဟန်မင်းထွန်း+ ဒေါ်အေးမြတ်နွယ် မိသားစု
၆၇ ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသော ဖခင် ဦးမောင်ရွှေ၊ မိခင် ဒေါ်ကြည်ညွှန့်၊ မောင်လေး မောင်စန်းဌေးနှင့်
မောင်စန်းလွင် အားရည်စူး၍ သမီးမခင်မြ ကောင်းမှု
၆၈ Ma Pyone and Mr See*
၆၉ ဦးလှမောင်+ (ဒေါ်တင်မြင့်) မိသားစု (မန္တလေး)
၇၀ Dr အောင်ကျော်စိန်+ Dr စိန်စိန်ရီ (UK)
၇၁ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုဇော်မျိုးလွင်+ မရူပါထွန်း မိသားစု
၇၂ ဦးလှအောင်+ဒေါ်သန်းညွန့်၊သမီး သင်းစုစုအောင် မိသားစု (မိခင် ဒေါ်သန်းညွန့်၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်)
၇၃ ဒေါ်စိန်သန်းမိသားစု (မင်္ဂလာဒုံ၊ ဝါယာလက်)
၇၄ မနှင်းနှင်းမော်၊ မဝင်းဝင်းကြည်၊ မသိဂီ ၤလင်း၊ မသိဂီ ၤဝင်း
၇၅ ဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်ကြီး+ ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းသန်းအေး သမီးဒေါ်ခင်ချောစု၊ သမီး ဒေါ်ခင်သန္တာ မိသားစု (ဘရူနိုင်း) *
၇၆ ဦးမြင့်သိန်း+ ဒေါ်ဝင်း သမီး မခင်ခင်ဝင်း မိသားစု*
၇၇ နှစ်ဘက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍
ကိုအောင်ခင်သော် + မယဉ်မင်းသူ မိသားစု
၇၈ ဦးအောင်စိန်ကီး+ ဒေါ်စောအေး မိသားစု
၇၉ ကိုမြင့်ဇော် + မစိုးပပမွန် မိသားစု
၈၀ နှစ်ဘက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုရန်နိုင် + မယမင်းသီရိ *
၈၁ ဒေါ်ကေသီအေး (ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်)*
၈၂ ဦးတင်ဦး+ ဒေါ်တင်တင်အေး သားသမီး မြေးတစ်စု(တ-ဥ၊ ရန်ကုန်)*
၈၃ ကိုဌေးနိုင်+ မနော်လေးရည်မွန်ထွေး သားသား ဖိုးရွှေသွေး(၂)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ
၈၄ ကိုစိုးမိုးကျော်+ မနှင်းသီတာ သမီး မစိုးဝတ်ရည်နှင်း မိသားစု
၈၅ ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးသိန်းတင်အားရည်စူး၍ မနော်ဇာဦး ကောင်းမှု
၈၆ မိခင်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ကြည်အား အမှုးထား၍ ဦးသိန်းတိုး+ ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်မိသားစု ကောင်းမှု
၈၇ မိခင်ကြီး ဒေါ်လှစုအား ရည်စူး၍ သား ဦးသက်မောင် အေး ကောင်းမှု
၈၉ မသိဂီ ၤထွန်း
၉၀ နှစ်ဘက်ဘိုးဘွား မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုသန်းထွန်းအောင် မတင်ထက်ထက်ကျော် သား မောင်သံလွင်ထွန်းထက် မိသားစု ကောင်းမှု
၉၁ ်မိဘများအား အမှုးထား၍ မရီရီမြိုင် ကောင်းမှူ့
၉၂ ဦးကျော်ဇော+ ဒေါ်သိဂီ ၤ မိသားစု*
၉၃ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်မြင့်အား ရည်စူး၍ Alex Liu Aung Kyaw+ မမြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia ကောင်းမှု*
၉၄ မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန် ၏ ၇၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် သမီးနီလာထက်ထက်အောင် ၏ ကောင်းမှု
၉၅ ကိုဝင်းစိုးခိုင်+ မဝင်းဝင်းသန့်
၉၆ ဦးအောင်ဝင်းဦး+ ဒေါ်နွယ်နွယ်ရီ
၉၇ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး (၆၁) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ
၉၈ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ အားအမှူးထား၍
Dr ဆွေဆွေယု နှင့်မောင်နှစ်မတစ်စု ကောင်းမှု
၉၉ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မနီနီမြင့် ကောင်းမှု
၁၀၀ နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှုးထား၍
၁၀၁ ကိုတင်ထွန်း+ မသိမ့်သိမ့်သူ သမီး
၁၀၃ ဦးညီမြတ် + ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ဌေး သမီး ထားအိဝေ၊ သား အောင်မြတ်ဖြိုး မိသားစု
၁၀၄ ဦးစိုးပိုင် + ဒေါ်သိန်းမြင့် မိသားစု
၁၀၅ ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးကြည်လှိုင်
(မြတ်ပညာ- အင်္ဂလိပ်စာ) ကောင်းမှု
၁၀၆ ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးစိုးမြင့်ဦးအား
မိခင် ဒေါ်ဟုန်တီ ၊ သား ကိုဥက္ကာစိုး + မတင်ဇာဖြူ ကောင်းမှု
ဦးအုန်းခင်+ ဒေါ်အုံးကျင် မိသားစု
မဝင်းလဲ့ထွေး ( မဝင်းလဲ့ထွေးနှင့် ဖခင်မွေးနေ့ အလှူ )
ဦးအုန်းကြိုင်+ ဒေါ်ခင်သိန်း မိသားစု (က၀ မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း)
နှစ်ဘက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုမြင့်ကြိုင်+မဖြူသဲထိုက် မိသားစု
၁၁၁ နှစ်ဘက်သောမိဘများဖြစ်ကြသော ဦးချစ်စွမ်+ ဒေါ်ခင်စု နှင့် (ဦးလီရှောင်ဖု)+ ဒေါ်ရှီပင်းဖွမ် တို့ အား အမှူးထား၍ ဦးသိန်းထွန်း+ ဒေါ်သန်းစိန် မိသားစုကောင်းမှု*
၁၁၂ ဦးသိန်းထွန်း (William Wu Bing Huang)+ ဒေါ်သန်းစိန် (Stella Lee Yu Sheng)
daughter Emily Wu Mei Chang,
son Kenneth Wu Rong Jie*
၁၁၃ ကိုဇော်လင်းအောင်+ မဇင်မာထွန်း မိသားစု
၁၁၄ ဦးဝင်းခန် ့၊ မဧပရယ် မိသားစု(ရန်ကုန်မြို့) * ၁.၅သိန်း
၁၁၅ နှစ်ဖက်သော မိဘဘိုးဘွားများကို အမှူးထား၍ ကိုလူမော်ကျော်ဦး + မဖူးပွင့်ဖြူ (Australia) *
၁၁၆ ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးကို အမှူးထား၍ မခိုင်မော်တိုး ကောင်းမှု
၁၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဘကြီးဦးချစ်ဆွေအား ရည်စူး ဦးမြတ်သောင်း+ ဒေါ်မေမေရီ မိသားစု
၁၁၈ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားများ ဖေဖေမေမေ တို ့ကို ဦးထိပ်
ထား၍ သမီးလေး ရွှန်းလင်းလဲ့စန္ဒာဧကရီသိုက်
(Moon Shi) ၏ (၆) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ နှင့် ဖေဖေ၏ မွေးနေ့ အလှူ 240 240 12'
၁၁၉ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍ ဦးသက်ဦး+
ဒေါ်မြင်မြင့်သိန်း သမီး မနုနုဝင်း၊ မသူဇာမို့ သားကျော်ကျော်စိုး ကောင်းမှု (ရန်ကုန်) ၁သိန်းခွဲ
၁၂၀ ဦးသန်းစိုး မိသားစု*
၁၂၁ ဦးအောင်မင်းလွင်+ ဒေါ်နေဇာ မိသားစု
၁၂၂ ဒေါ်ချိုတီး၊ ဒေါ်ဘေဘီ၊ ဒေါ်ကာကီ၊ သား မောင်မောင်လွင်
၁၂၃ ကိုမင်းအောင်မွန် + မချောချောနွယ်
၁၂၄ မဆွေဆွေစန်း + မမျိုးမျိုးသွင်*
၁၂၅ မထားအိေ၀ မွေးနေ့အလှူ
၁၂၆ ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း ဦးတင်ညို အားရည်စူး၍ ဇနီး ဒေါ်နုနုဆွေ မိသားစု
၁၂၇ မိခင်ကြီး ဒေါ်ညွန့်တင်အား အမှုးထား၍
၁၂၈ ဦးမောင်မောင်တင့်+ ဒေါ်တင်တင်ဝင်း သမီး မိသားစု
၁၃၀ ဖခင်ဦးမောင်မောင်သန်း+ မိခင်ဒေါ်ခင်ဦးလွင်
တို့ကို အမှုးထား၍ သမီး မသန်းသန်း
လွင် မောင်နှမတစ်စု မိသားစု
၁၃၁ မနွယ်နွယ်အေး အားရည်စူး၍ ဦးညီလေး + ဒေါ်သန်းဆင့် မိသားစု (မုံရွေးရွာ) ကောင်းမ 200 200 10'
၁၃၂ မဆွေဇင်ငြိမ်း နှင့် သမီး မီးမီးကြွေရုပ် 200 200 10'
ကွယ်လွန်သူ ဦးလီရှောင်ဖု အားရည်စူး၍ ဒေါ်ရှီပင်ဖွမ်း ဒိုင်းမွန်း မိသားစု (ဗန်းမော်)
ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ရှိန်+ ဒေါက်တာ သင်းသင်းညွှန့် သားမောင်သုတ (Jamaica)
ဒေါ်လှမေ ( Jamaica)
ကိုဇော်လင်းအောင်+ မသိန်းသိန်း မိသားစု
( ဦးသော်တာမြင့်)+ ဒေါ်နန်းထားတင် သမီး နန်းမိုမိုသော်*
ဦးခင် မောင်ဝင်း + ဒေါ်ပိုက် မိသားစု။ ဆင်ဖြူကျွန်းမြို
ဦးအောင်စိုး+ ဒေါ်ခင်ထားအေး မိသားစု
ကိုလှိုင်မင်းစိုး+ မဝတ်ရည်နေဝင်း မိသားစု (မင်္ဂလာ ၄နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် )
ဦးကျော်တင့် မိသားစု နှင့် ဦးစိုးဝင်းမိသားစု
ဖခင်ကြီး ဦးစိုးမြင့်ဦးအား ရည်စူး၍ မိခင် ဒေါ်ဟုန်တီ (ခေါ်) ဒေါ်ပုံ့ နှင့် သား ကိုဥက္ကာစိုး+ မသင်ဇာဖြူ မိသားစု ကောင်းမှု
ဦးညီညီ+ ဒေါ်နုနုရီ မိသားစု
မိခင်ကြီး ဒေါ်နုနုရီနှင့် ကွယ်လွန်သူ နှစ်ဘက်မိဘများအား ရည်စူး၍ ဦးညီညီမြင့် ဒေါ်မိုးမိုးကျော် သား မောင်အာကာဟိန်း မိသားစု ၂၀၀၀ဝိ 1.33
၃၁ ဦးတင်မောင်ဆွေ+ ဒေါ်ခင်ဌေးမြင်. သမီး မစောယုဆွေ မိသားစု
၃၂ ဦးအေးကြူ+ ဒေါ်နီလာကျော် 100
၃၃ မအေးသန့်စင်	 50
၃၅ ကိုဇင်မင်းအေး+ မသန္တာအောင်
ဦးဝင်းသိန်း+ ဒေါ်အေးမြင့် မိသားစု
၃၈ ရှင်စောပု ဘုရားအဓိဌာန်အောင် - ဦးနေမျိုး+ ဒေါ်ခင်သန်းဦးမိသားစု
၃၉ ကိုမျိုးဝင်းရီ+ မရည်မွန်သော်
၄၀ ကိုနေလင်းဦး+ မခင်ထားထွန်း ( မဝိုင်းတူး) သား Zander (USA) 100 100 5'
၄၁ ဒေါ်သန်းရီ မိသားစု ၂၀၀၀၀ 1.33
၄၂ ဦးစံသာဟန်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် မိသားစု (ရန်ကုန်) ၁သိန်း 6.67'
၄၃ ဦးကျော်လင်းဇော်+ ဒေါ်အေးမြတ်စံ (ရန်ကုန်)* (အလုံ၊ ရန်ကုန်)
၄၄ ဦးပီတာ+ ဒေါ်ခင်မြတ်ချို မိသားစု (မ-ဒဂုံ)* ၇၅၀၀ဝိ 5'
၄၅ ဦးမျိုးမင်းသူ+ ဒေါ်စိုးမြတ်မြတ်ရှိန် မိသားစု (ဗိုလ်ထထောင်၊ ရန်ကုန်)* ၇၅၀၀ဝိ 5'
၄၆ ဦးအေးသောင်း+ ဒေါ်သန်းမြင့်မိသားစု 50 50 2.5'
၄၇ ဦးထွန်းခင်+ ဒေါ်ခင်ကြည်မိသားစု 50 50 2.5'
၄၈ ဦးရဲဝင်း+ ဒေါ်အေးအေးမူ သား ကိုရဲနိုင်ဦး မိသားစု 100 100 5'
၄၉ ဦးတင့်ဝေ+ ဒေါ်လှရီ မိသားစု (၃၁၊ သုန္ဒာလမ်း-တိုးချဲ့) မြောက်ဥက္ကလာ။ 100 100 5' 5'
၅၀ ပြုံးပန်းတရာမိသားစု	 100 100 5'
၅၁ ဦးမောင်ထွန်း+ ဒေါ်တင်ညို ( ပေါက်ခေါင်း) 100 100 5'
၅၂ ဒေါ်ငွေတင်၊ မြေးရွှန်းပြည့်စုံခင် 10 10 0.5'
၅၃ ဦးမောင်ဝင်း+ ဒေါ်သန်းသန်းအေး မိသားစု 100 100 5'
၅၄ ဦးကျင်စွမ်း+ဒေါ်အေးအေးသန်း မိသားစု (ကျောက်တံခါး) 70 70 3.5
၅၅ ဦးမြင့်ထွန်း+ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	 50 50 2.5'
၅၆ ကိုနေထွန်းအောင်+မတင်လေးနွယ် သမီး ခိုင်နေနွယ် 100 100 5'
၅၇ စေတနာရှင် ဇနီးမောင်နှံ 100 100 5'
၅၈ မဇင်မျိုးဌေး 50 50 2.5'
၅၉ ဒေါ်ငွေတင် နှင့်မြေး ရွှန်းပြည့်စုံခင် 20 20 1.0'
၆၀ ကိုအောင်နိုင်ဝင်း 110 110 5.5'
၆၁ ိုမိခင်ဒေါ်ဝင်းကြည်အားအမှူးထား၍ သီလရှင် ယောဂီ မတိခ္တညာဏီ (မကေဇာလှိုင်) ကောင်းမှူ့ 50 50 2.5'
၆၂ ကိုစိုင်းညီညီ+ မစုစုဝင်း သားသား စိုင်းအာကာလင်း မိသားစု * 50 50 2.5'
၆၃ မိခင်ကြီး ဒေါ်ဝင်းကြည်အားအမှူးထား၍ ဦးလှမြင့်+ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် မိသားစု* 100 100 5'
၆၄ ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်ညိုညိုခင် မိသားစု* 50 50 2.5'
၆၅ နှစ်ဘက်မိဘများ အမှုးထား၍ ကိုဝင်းထွန်းလင်း+ မအေးသီတာမြင့် * 50 50 2.5'
၆၆ မမေဇင်မြင့် * 50 50 2.5'
၆၇ မခင်စိုးစိုး * 150 150 7.5'
၆၈ ဦးတင်ဝင်း+ ဒေါ်တင်တင်ကြည် မိသားစု* 50 50 2.5'
၆၉ ဒေါ်ပုံ့ပုံ့ထူး* 100 100 5'
၇၀ ဒေါက်တာကိုကိုအေး+ ဒေါ်ခင်မြအေး မိသားစု* 50 50 2.5'
၇၁ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးများအား ရည်စူးပြီး မိခင်ကြီးများအား အမှုးထား၍ ကိုကျော်ဖြိုးဝေ+ မအေးမြတ်အောင်* 50 50 2.5'
၇၂ မောင်မင်းဇေယျာနိုင်+ မကေသီခိုင်* 50 50 2.5'
၇၃ ကိုမျိုးအောင်+ မမေသူသူထွန်း သား ကျော်ကိုကိုလင်း မိသားစု* RM 50 20 1'
၇၄ မခင်မာဌေး * 150 150 7.5'
၇၅ ဦးတင်မြင့်+ ဒေါ်စုစုငြိမ်း * 100 100 5'
၇၆ အလှူရှင်တဦး* RM 100 40 2'
၇၇ ဦးသော်တာမြင့် အားရည်စူးရွေ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု 100 100 5'
၇၈ ဒေါ်ဝင်းဝင်း* 50 50 2.5'
၇၉ အလှူရှင်တဦး* 50 50 2.5'
၈၀ အလှူရှင်တဦး* 40 40 2'
၈၁ ကိုမျိုးမြင့်နှင့် ညီအကိုများ ကောင်းမှု(ရန်ကုန်)* 50 50 2.5'
၈၂ ဒေါ်သန်းသန်းရီအားရည်စူး၍ ဦးဌေးအောင်+ သမီး သိမ့်သဇင်၊ သားအောင်ဖြိုးသွင်ကောင်းမှု* 50 50 2.5'
၈၃ မဝင်းဝါဝါ 100 100 5'
၈၄ သားသား လူမောင်ဘဦးမင်း 100 100 5'
၈၅ ဦးခင်မောင်စန်း+ ဒေါ်အေးနန္ဒာဆန်း မိသားစု (ရန်ကုန်)* 20 20 1'
၈၆ မသီတာထွန်း	 50 50 2.5'
၈၇ နှင်းနှင်းလှိုင် ရောင်းဝယ်ရေး မိသားစု	 100 100 5'
နှစ်ဘက်သောမိဘများ အမှုးထား၍ ..
100 100 5'
၈၉ ကိုစိုးမိုးနိင် မွေးနေ့အလှူ 80 80 4'
၉၀ ဒေါ်အေးအေးလှိုင် သားဇော်မင်းပိုင် 100 100
၉၁ မခင်ပြည့်ပြည့်ထွန်း	 50 50 2.5'
၉၂ မောင်မျိုးကိုကို	 50 50 2.5'
၉၃ ကိုမြင့်သန်းထွန်း	 50 50 2.5'
၉၄ ကိုသူရိန်ညွန့်+ မဝင်းဝင်းနွယ် သမီး သွန်းကြယ်စင် မိသားစု 100 100 5'
၉၅ ကိုထင်အောင်ကျော်+ မခင်သက်ထား သားသား ခန့်ခန့်မိသားစု 100 100 5'
၉၆ ဦးခိုင်+ ဒေါ်သန္တာအိအိဝင်း သား မောင်အောင်ခန့်ခိုင်၊ မောင်ခန် ့စိုးလင်း၊ မောင်ခန့်စိုးဝင်း 100 100 5'
၉၇ ကိုသန်းထိုက်အောင်+ မ Raj ဟေမာ သား သူရိန်ထိုက် 60
၉၈ ကိုသက်နိုင်ဦး+မဆုမွန်သိန်း 50 50 2.5'
၉၉ ကိုကျော်ကျော် 100 100 5'
၁၀၀ ကိုစိုးသီဟ 50 50 2.5'
၁၀၁ ကိုမင်းထွဋ်ဝင်း+ မချိုနှင်းအေး 100 100 5'
၁၀၂ ကိုတင်မောင်ဆန်း+ မမြတ်သူဇာအောင် သမီး ရွှန်းလဲ့ဝသုန် သား ခန့်ပြည့်ဦး မိသားစု 100 100 5'
၁၀၃ မမိုးစိမ့်စိမ့်အေးနှင့် မိသားစု 50 50 2.5'
၁၀၄ ကိုစောလွင်ဦး + မသင်းသက်သက်ဆွေ 100 100 5'
၁၀၅ ဦးကျော်မင်း+ ဒေါ်မွန်နှင်းထွန်း 100 100 5'
၁၀၆ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးမြင့်လွင်အား ရည်စူး၍ သားသမီးများ ဖြစ်ကြသော ကိုကျော်စွာလင်း၊ မတိုးတိုးဇော် မြေး မောင်ဂျွန်လင်း ကောင်းမှု 100 100 5'
၁၀၇ မဖြိုးဖြိုးခိုင် 20 20 1'
၁၀၈ ကိုဇာနည်မောင်+ မချိုသန္တာ 60
၁၀၉ ကိုအောင်မျိုးမြင့်+ မမြင့်မြင့် မိသားစု 100 100 5'
၁၁၀ ချမ်းေ၀ ဆေးဆိုင် 64 64 3.2'
၁၁၁ ကွယ်လွန်ပြီးသော နှစ်ဘက် မိဘများအား
ရည်စူး၍ ဦးဝင်းလွင်+ ဒေါ်ပြုံး 50 50 2.5'
၁၁၂ ဦးဝင်းလွင်+ ဒေါ်ပြုံး မိသားစု 50 50 2.5'
၁၁၃ မမြတ်မြတ်မိုး နှင့် ဒေါက်တာသင်းသင်း
ညီအစ်မ လသာလမ်း ရန်ကုန်မြို့*
၁၁၄ ဒေါ်မေကြည်ဝင်း၊ ဦးသန်းထွန်းအောင်၊
(ညောင်တန်း အိမ်ရာ)* ၆၀၀၀၀ 4'
၁၁၅ ဦးသန့်ဇော်ဦး+ ဒေါ်ကြူ ကြူ ဝင်း မိသားစု(ညောင်တန်း အိမ်ရာ)*
၁၁၆ မအိအိအောင် 80 80 4'
၁၁၇ မခင်လှချို*55 0.25'
၁၁၈ ကိုဇော်မျိုးဝင်း+ မနွဲ့ဌေး* 50 50 2.5'
၁၁၉ ကိုဇော်လင်းဦး 100 100 5'
၁၂၀ မောင်ချစ်ရဲမင်းထွဋ်၊ မမေသြင်္ကန်၊ မဖြူငြိမ်းချမ်း၊ မမေဇင်မောင် 50 50 2.5'
၁၂၁ ဦးမောင်မောင်လေး+ ဒေါ်နုနုခင် သမီး စုသီဟန်၊ ယုသီဟန် မိသားစု 100 100 5'
မိဘ နှစ်ပါးအားအမှုးထား၍ မရွှန်းလဲ့ရည် နှင့် မောင်နှမ များ
ဦးဝင်းမြင့်ဆန်း ဒေါ်ခင်မြမြ သမီးSandy မိသားစု*
၁၂၄ ဦးထွန်းနောင်+ ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု 30 30 1.5'
20 20 1'
ဘိုးဘိုး ဦးခင်ဝင်း+ ဘွားဘွား ဒေါ်ဖြူဖြူလွင်
သမီး ညွှန်းဧကရီထွန်း မိသားစု
၁၂၉ ဦးခင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်ခင်မာမာ အားအမှူးထား၍ မမိုးစင်သာ ၊ မဇင်မာဝင်းဆွေ မိသားစု 100
၁၃၀ ဦးမျိုးထိန်+ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း မိသားစု 100
၁၃၃ Late fateher Lew Kaia, Lew Yew Kwee and family members 100
နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုအောင်ကျော်မိုး+ မလင်းလင်း မိသားစု
၁၃၅ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုမျိုးမောင်မောင်ဇော်+ မလဲ့လဲ့ထွန်း သမီး ချမ်းမြသူ မိသားစု 100
၁၃၆ ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးတင်ထွန်းအားရည်စူး၍
ဒေါ်နုနုရီနှင့် သားသမီး မြေးတစ်စု 100
၁၃၉ မစုမွန်ဝင်း 40 40 2'
၁၄၀ မဟန်ယုမော် 20 20 1'
၁၄၁ နန်းစုမွန်ပန်း 20 20 1'
၁၄၂ နန်းစုမွန်ရည် 20 20 1'
၁၄၃ မရည်မွန်ဦး 20 20 1'
ဦးမြင့်လွင်ခိုင်+ ဒေါ်မြင့်မြင့်တင် ကိုမျိုးဟိန်းဇော်+ မခင်ဇာဖြူခိုင် သား မောင်လူဖုန်းသစ်မိသားစု*
60 60 3'
၁၄၆ နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူထားပြီး ကိုစိုးမင်းလတ် + မယဉ်ယဉ်ထွန်း သမီးကြီး မရွှေသဲလှိုင်၊ သမီးငယ် မယဉ်သီရိလတ်၊ သား မောင်ရှင်းသန့်အောင် မိသားစု 100 100 5'
၁၄၇ ဒေါ်မြဦး မဖြူဇာခိုင် မိသားစု 20 20 1'
၁၄၈ ဦးသန်းမြင့်၊ မနီနီမြင့် မိသားစု 80 80
၁၄၉ ကိုမြစိုး+ မနန်းအေးခိုင် သား မောင်မင်းခန့် မိသားစု 60 60
၁၅၀ ကိုစိုးစိုးထွန်း 60 60 3'
၁၅၁ ကိုရဲထွဋ်ဝင်း+ မသင်းသင်း မိသားစု 100 100 5'
၁၅၂ ဦးကျော်ဝင်း+ ဒေါ်ကြည်ခင် သား ကိုမိုးကျော်သူ(စင်္ကာပူ)၊ သမီး မမျိုးသန္တာ မိသားစု 100 100 5'
၁၅၃ နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူထား၍
မောင်ထက်မြက်ကျော်+ မအေးမျိုးမမခိုင် မိသားစု 60 60 3'
၁၅၄ မချောစုယဉ် 100 100 5'
၁၅၅ မနှင်းအိ 30 30 1.5'
၁၅၆ Ms Cai Feng 20 20 1'
၁၅၇ ကိုကျော်ကျော်ထက် မိသားစု(ရန်ကုန်မြို ့ု)* ၇၅၀၀၀ 5'
၁၅၈ ကိုနိုင်ဝင်း မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)* ၃၀၀၀၀ 2'
၁၅၉ ကိုနိုင်ဝင်း (IT) မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)* ၃၀၀၀၀ 2'
၁၆၀ ကိုညီဇော်မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)* ၃၀၀၀၀ 2'
၁၆၁ ဦးစိန်မြိုင် မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)* ၄၅၀၀၀ 3'
၁၆၂ မလေးလေးနွယ် မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)* ၁၅၀၀၀ 1'
၁၆၃ ဦးကိုကိုကြီး+ ဒေါ်ခင်ညိုဝင်း မိသားစု 40 40 2'
၁၆၄ ဦးချိုတူး(ကွယ်လွန်)+ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း မိသားစု 40 40 2'
၁၆၅ မရီရီမာ 60 60 3'
၁၆၆ မနှင်းနန္ဒာအောင် 20 20 1'
၁၆၆ မနှင်းနန္ဒာအောင် 20 20
၁၆၇ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+ မဝင်းလဲဖြူ မိသားစု 100 100 5'
၁၆၈ မိဘနှစ်ပါးအားအမှုးထား၍ မနန်းမိုးမိုးအောင် 50 50 2.5'
၁၆၉ နှစ်ဖက်သော မိဘဘိုးဘွားများကို အမှူးထား၍ ကိုသီဟ ကြည်လွင်+ မထက်ထက်ကျော် 100 100 5'
၁၇၀ မဖြိုးဖြိုးခိုင် 20 20 1'
၁၇၁ ဦးကျော်ဇော+ ဒေါ်လှလှဝင်း သား ကိုဆုမောင် မိသားစု* ၁သိန်း 6.67
၁၇၂ မမေစုခိုင် 20 20 1'
၁၇၃ ကိုဇော်မင်းသိန်း+ မခင်အောင်သူ သမီး ဝိုင်းကြည်ဖြူသန့် မိသားစု 40 40 2'
၁၇၄ နှစ်ဖက်သော မိဘဘိုးဘွားများကို အမှူးထား၍ ဦးကျော်သူထွန်း+ ဒေါ်စုစုဌေး ၁သိန်း 6.67
၁၇၅ ဦးစန်းမြင့်+ ဒေါ်အေးမြ သမီး မလှိုင်လှိုင်နွယ် 100 100 5'
၁၇၆ ဦးဝင်းမောင်+ ဒေါ်စန်းစန်းမော် မိသားစု 50 50
၁၇၇ ကိုဇေယျာဝင်း+ မခင်ယုဇန သားဇေသိဒ္ဓိ 50 50
၁၇၈ ကိုသက်ဇော်ဦး+ မမော်မော်မြင့် မိသားစု 50 50
၁၇၉ ဦးကြည်ဝင်း+ ဒေါ်မြင့်မြင့်မွန် မိသားစု 20 20
၁၈၀ သားသား ကောင်းထက် ၁၀လ ပြည့်မွေးနေ့အလှူ
(ဒက်ဒီ နေမျိုးဆွေ၊ မာမီ ခင်ကောင်းဆက်)* 100 100 5'
၁၈၁ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ် (၂၆-၀၈-၂၀၀၄) က ကွယ်လွန်ခဲ့သော
မိခင်ကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့် အား ရည်စူး၍ ကိုသက်နောင်+ (သမီး) မဆွေဇင်ဆန်း မြေး
မောင်သုတဇော် ကောင်းမှု 100 100 5'
၁၈၂ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍
ကိုယုဝေလွင်+ မသီတာဝင်း မိသားစု ကောင်းမှု (ရန်ကုန်မြို့) ၃၀၀၀၀ 2'
၁၈၃ ကိုဇော်လေး+ မစိုစိုး 30 30
၁၈၄ မအေးသန္တာထွန်း 20 20
၁၈၅ ကိုသန်းထွန်းကျော် + မမျိုးမျိုးပိုင် သား မောင်ဘုန်းမြတ်သော် မိသားစု 50 50 2.5
၁၈၆ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားများ ဖေဖေမေမေ တို့ကို ဦးထိပ်ထား၍ သမီးလေး မေရီသန့်ဇင် ၏ (၁) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ နှင့်
မေမေ၏ မွေးနေ့ အလှူ * 100 100 5'
၁၈၇ ကိုစိုးသီဟ+ မမြတ်မြတ်မိုး 100 100 5'
၁၈၈ ကိုလှမိုးနိုင်+ မဆွေဇင်ဦး သမီး မိုးစင်တီဆွေ၊ ရွှန်းလဲ့သော်တာ မိသားစု* 100 100 5'
၁၈၉ Dr ဆန်းထွန်း + မမြင့်မြင့်ဝင်း မိသားစု 100 100 5'
၁၉၀ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်+ မမေဇင်ချို* 20 20 1'
၁၉၁ Mr See Kay Tee @ ဦးချမ်းသာ* 100 100 5'
၁၉၂ ကိုအောင်ကျော်* U$ 50 3.3'
၁၉၃ ကိုဉာဏ်ထွန်းလွင်* U$100 6.67'
၁၉၄ ကိုတင်အောင်ချို+ မမေသဇင်လွင် ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1'
၁၉၅ ဒေါ်အေးမြင့် ( သံလျင်) နှင့် မြေး မမြင့်အိသူဒွေး ( EFR G Link) * ၃၀၀၀၀ 2'
၁၉၆ မခင်စန်းေ၀ ( EFR G Link) * ၄၅၀၀၀ 3'
၁၉၇ မမို့မို့မြင့်ခိုင်၊ မသီတာထွန်း၊ မခင်သီတာအောင်၊ ကိုရဲသီဟ၊ ကိုထူးမောက်ဘုန်းခိုင်၊ Mkt Team ( EFR G Link) * ၃၀၀၀၀ 2'
၁၉၈ ဖေဖေ ဦးကျော်သူမော်+ မေမေဒေါ်ဇင်မျိုးဟန် တို့အား အမှုးထား၍ သမီး မရတီဖူးပွင့်မော် (အ.ထ.က-၄ ဗိုလ်ထထောင်) * ၉၀၀၀၀ 6'
၁၉၉ ကိုကျော်ငြိမ်းချမ်း ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၀ မသွယ်သွယ်ဦး ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၁ ွ်ကိုစိုးကိုကို+ မသဉ္စာလီဦး ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၂ မအိအိအောင် ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1'
၂၀၃ ကိုအောင်သူကို ( EFR G Link) * ၃၀၀၀၀ 2'
၂၀၄ မတင်နီလာမြင့် ( EFR G Link) * ၃၀၀၀၀ 2'
၂၀၅ ကိုဝေဖြိုးထွန်း ( EFR G Link) * ၁၅၀၀၀ 1
၂၀၆ ကိုကျော်ဇင်လတ် 40 40 2'
၂၀၇ ကိုကောင်းစံ+ မဖြူစင်ထက် 100 100 5'
၂၀၈ မဆွေဆွေမြင့် 60 60 3'
၂၀၉ ဒေါ်ခင်လေးရွှေ (မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်) 10 10 0.5'
၂၁၀ ကွယ်လွန်သူ ဖွားဖွားကြီး ဒေါ်ခင်ခင်အေး အားရည်စူး၍ ကိုမြတ်မင်း+ မစောသန္တာ သားလေး မောင်သူရိန်@ Eddy Min မိသားစု 100 100 5'
၂၁၁ သားလေး မောင်သူရိန်ရဲ့ ၂၉-၁၀-၂၀၁၄ မှာ ကျရောက်တဲ့ (၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ ့အလှူ 100 100 5'
၂၁၂ ဖိုးဖိုး ဦးစောရှိန်နှင့် ဖွားဖွား ဒေါ်ကြင်ရီအား အမှုးထား၍ ဖိုးဖိုး ဦးစောရှိန်၏ ၅-၁၀-၂၀၁၄ မှာကျရောက်တဲ့ (၇၇) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အလှူ 100 100 5'
၂၁၃ အန်ကယ် ဦးကြိုင်ဝှက်အား အမှုးထား၍ သားလေး မောင်သူရိန်@ Eddy Min ကောင်းမှု 100 100 5'
၂၁၄ ဒေါ်ခင်မေရီ 100 100 5'
၂၁၅ ကိုစောကျော်လင်းထက်နှင့် မောင်နှမများ * 30 30
၂၁၆ မိခင်ကြီး ဒေါ်မြမြဝင်းအားရည်စူး၍ ကိုအောင်မြတ်လွင်+ မမြသန္တာ သမီး မြဇွန်ပွင့်အောင် ကောင်းမှု 100 100 5'
၂၁၇ 1. Late father, Lew Kai, 2. Lew Yew Kwee and family members 100 100 5'
၂၁၈ ကိုမျိုးဝင်းရီ+ မရည်မွန် ၉၀၀၀၀ 6'
၂၁၉ ဗိုလ်မှုး မြတ်နေထွန်း+ မအေးဇာလီ US50 3.3'
၂၂၀ ဦးသန်းထိုက်အောင် + ဒေါ်နီလာလှ မိသားစု ကောင်း မှူ့ 150 150 7.5'
၂၂၁ မခိုင်မွန်မြင့် 100 100 5'
၂၂၂ ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မဖြူဖြူသိန်း မှ အုတ်လမ်းအလှူ 100 100 5'
၂၂၃ ထွန်းသက်အောင် 50 50 2.5'
၂၂၄ ခင်သန္တာလွင် 30 30 1.5
၂၂၅ ဦးကျင်စွမ်း+ဒေါ်အေးအေးသန်း မိသားစု 30 30 1.5'
၂၂၆ Chief officer MV Boheme ကိုမြင့်မောင် 50 50 2.5'
၂၂၇ ခိုင်ခန့်ကျော်+ဆွေဇင်မြတ် 100 100 5'
၂၂၈ Stefan Gadringer AUD 20 AUD 20 1'
" ကုသိုလ်တရားတို့၏ အကြောင်းတရားသည် ယောနိသော မနသိကာရ၊